လုပ်ငန်းကို ထူးခြားစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ်ပုံကို ကြော်ငြာဘုတ်တွင် အသုံးပြ? - Yangon Media Group
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး၏ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွင် မွန်ပြည် နယ်ဝန် ကြီးချုပ်၏ရုပ်ပုံ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်းမှာ ထိုစီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်သည် လုပ်ငန်းကိုထူးခြား အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သူ တစ်ဦးဖြစ်၍ မိမိ၏ရုပ်ပုံ ကိုကြော် ငြာ Billboard တွင် အသုံးပြု ခွင့် ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံ က ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်က ကျင်းပသည့် စိမ်းလဲ့တင် Adventure Land ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်း မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအေးဇံ၏ပုံကို ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ” ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ကြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် စိမ်းလဲ့တင်သဘာဝအပန်းဖြေ လုပ်ငန်းက မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်က တည်းကစခဲ့တယ်။ ပထမဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ ပန်းအလှလုပ်ငန်း၊ ပြီး တော့ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့ ရေလွှာ လျှောစီးတို့၊ အမြင့်ခုန်၊ အင်တာ နေရှင်နယ်စံချိန်စကိတ်စီးတာတို့၊ ကြိုးတန်းစတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်မြင်အောင် လုပ်လာတဲ့အတွက် မွန်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်အကိုင်တွေလည်းပေါ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ သူရဲ့ကြော်ငြာဘုတ်မှာ ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတာဖြစ် ပါတယ် ” ဟု ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ အေးဇံက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဓာတ်ပုံအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းအပေါ် လူမှုစာမျက်နှာ Facebook ပေါ်တွင် ဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ “မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အခုလိုစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းကြော်ငြာမှာ ဓာတ်ပုံအသုံးပြုခွင့်ပေးတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် ” ဟု အရပ်ဘက်လူ မှုအဖွဲ့အစည်းဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ စိမ်းလဲ့တင် (သဘာဝအပန်း ဖြေစခန်း)သည် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ၊ မော်လမြိုင်- ရန်ကုန်အဝေးပြေးကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်များတွင် NV ကတ်ပြုလုပ်သူနှင့် လုပ်ကိုင်ပေးသည့် အဖွဲ့ ခြိမ?
(၉)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅ဝဝ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်နှင့် အထက် ထီဆုငွေမျ??
မြန်မာနိုင်ငံမှ သင်္ဘောဖြင့်တင်သွင်းလာသည်ဟုဆိုသော ကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေး ၁ ဒသ?